Sanduuqyada Calaamadda Gaarka ah ee Khaaska ah ee Shiinaha Jilibka 3D Karbaash 100% Warshadda Warshadaha iyo Warshadaha Warshadaha iibiya | Weiti
Jumladaha Khaanadaha Calaamadaha Gaarka ah ee Khaaska ah 3D Karbaashyada 100% Warshadaha Indhaha ee Mink Dhab ah
1, qaabka AILSA 18mm mink fur
2, Jilicsan, jilicsan, indhashareerka 3d ee dabiiciga ah
3, Calaamadda khaaska ah ee la -habeeyay oo la heli karo
4, 100% timo mink oo aad u fudud oo gacanta lagu sameeyay
OEM & ODM Indho Been
Astaanta gaarka ah ee naqshadda gaarka ah
Qiimaha tartanka jumlada
Khibrad wax soo saarka indhashareerka hodanka ah
100% mink arxan -darro dhab ah
Astaanta gaarka ah ee gaarka ah
200000 lammaane bishii
Indhaheenna beenta ah dhammaantood waa gacmo-gacmeed, oo laga sameeyay timo mink oo aad u fudud, kaas oo u jilicsan oo qalafsan sida baalashaada dabiiciga ah. Indhashareerka beenta ah ee gacanta lagu sameeyay ayaa dib loo isticmaali karaa oo si taxaddar leh loo daweyn karaa. Iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda indhashareerka la simay, baalasheedu waxay noqon karaan kuwo dabiici ah oo jilicsan sida indhashareerka dhabta ah, oo kuu oggolaanaya inaad had iyo jeer istaagto.
Noocyo kala duwan oo iibinta kulul ayaa la heli karaa, waxayna sidoo kale taageertaa habaynta qaababka ay macaamiishu u baahan yihiin. Macaamiishu waxay u baahan yihiin oo kaliya inay na siiyaan shuruudo gaar ah iyo cabbirro ama shay -baarka jirka.
Indhashareerka beenta ah ee la xushay alaabta ceyriinka ah, sanado badan oo uruurinta waayo-aragnimo ah, waxaan horey u haysannay alaab-qeybiyeyaal alaab ceeriin ah oo tayo sare leh, waqti dheer na siiya alaab ceyriin oo wanaagsan.
100% gacanta lagu sameeyay. Marka la barbardhigo wax -soo -saarka mashiinka, wax -soo -saarka gacanta ayaa hubin kara in indhashareerka beenta ah uusan khalkhal gelin doonin, waxaanna gacanta ku marsannaa xabagta si aan u hubinno in indhuhu aysan dhicin.
Baakadaha indhashareerka ee kala duwan waa la beddeli karaa. Soo -habeynta astaanta, baakadaha kaydka ee diyaarka ah waxay taageeraan daabacaadda 3d UV. Sanduuqa la habeeyay wuxuu taageeraa daabacaadda UV iyo daabacaadda shaabadaynta kulul.
Karbaashyada kaydka ah ee diyaar ah, waqtiga dhalmadu waa 48 saacadood gudahood, oo loogu talagalay jeedal karti leh, wakhtiga dhalmadu waa 7-25 maalmood gudahood.
Baaritaanka macmiilka ayaa la daryeeli doonaa marka ugu horreysa. Wixii su'aalo degdeg ah, fadlan nagala hadal taleefan ama farriin toos ah.
Dhibaatooyin kasta oo tayo leh ama waxyeello ka soo gaarto gaadiidka, waxaad weydiisan kartaa soo -celin ama dib -u -celin alaab 3 maalmood oo shaqo gudahood.
Waa maxay sababta loo xidhayo karbaashyada beenta ah?
Indhashareerka beenta ah ayaa indhaha ka dhigi kara mid weyn oo soo jiidasho leh, sidoo kale heerka leexashada ayaa sidoo kale la jaanqaadi kara baalasha indhaha, oo u ekaan doona mid soo jiidasho leh.
Baaritaanno been ah ayaa ka jiray Masar hore iyo Rooma. Baaritaannada indhaha ayaa mar loo tixgeliyey inay yihiin astaanta ugu soo jiidashada badan. Goor dambe, ka dib dhalashada indhashareerka beenta ah, dad badan ayaa sidoo kale dabagalay indhashareerka. Sannadkii 1916 -kii, agaasime filim wuxuu adeegsaday timo dhab ah si uu u sameeyo indhashareer been abuur ah baahiyaha filimada iyo soo -saarka telefishanka. Goor dambe, moodel Ingiriis ah ayaa bilaabay habdhaqanka xirashada indhashareerka beenta ah, dad badanina way ogaayeen jiritaanka indhashareerka beenta ah.
Marxaladda dambe ee indhashareerka beenta ah, waxaa jira noocyo badan, qaabab iyo midabyo kala duwan, iyo waqtiyo kala duwan. Laakiin si kasta oo ay yihiin baalasheeda beenta ah, waxay indhaha ka dhigi karaan "hadal" ka dib marka la marsiiyo, indhaha soo jiidashada lehna waxay ku filan yihiin inay dhaleeceeyaan. Goor dambe, dad badani kuma qanacsanayn indhashareerka indhashareerka oo waxay rabeen inay u oggolaadaan inay wejigooda si joogto ah ugu koraan, farsamadii fidinta baalashana way dhalatay.
Guud ahaan, baarkii ugu horreeyey ee beenta ahaa wuxuu ahaa uun inuu muujiyo soo jiidashada dumarka, laakiin hadda indhashareerka beenta ah ayaa fiiro gaar ah siiya wax -ku -oolnimada, oo ku habboon qaabka isha dadka, laakiin sidoo kale waxay ka dhigi kartaa indhaha mid weyn oo soo jiidasho leh.
Hore: Calaamadda Gaarka ah ee Jumlada ah 100% Gacan -ku -samayska Xad -gudubka 3D ee Mink Indhaha
Xiga: Abuur Calaamaddaada Gaarka ah ee Gaarka ah Jeexyada Indhaha Beenta ah ee Jumlada ah
3d mink iibiyaha jeedal
samayso karbaash kuu gaar ah
mink eyelashes iibiyaasha
baarkooda astaanta gaarka ah
jeedal mink, indho -dejiye, Iibiyeyaasha Indhaha, Jeexa indhaha, dibinta, Kordhinta Indhaha,